कथा : साहिँलीको माया
– भुवन तामाङ
“प्यारी प्राण प्रिय साहिँली ! कोशीको अबिरल कञ्चन पानी जस्तै धेरै–धेरै अटुट माया तिमीलाई । सञ्चै त छौ होली तिमी ? म यता सञ्चै छु । तिम्रो आद आउन्जेल म किन पो बिरामी हुन्थे र ! तर लामो समय भेट नहुँदा अलि बिरामी परिहाल्छु तर, जब तिम्रो उज्यालो मुहारको झझल्को आउँछ, चट्टै पो निको भै हाल्छु । निकै दिन भयो आकाशमा कालो बादल कुदेर तिम्रो त्यो स्वर्ग जस्तै सुन्दर गाऊँ रहेको पहाड छेलिन थालेको । सिगरेटको धुँवा हातले हम्काए जस्तै गरी बादल हम्काउन सकिन साहिँली । घरहरु त के देखिन्थ्यो र त्यै पहाड हेरेर पनि चित्त बुझाउँथे । हुन त तिमी पनि त्यसै भन्ने गथ्र्यौ यता मेरो गाऊँ रहेको पहाड हेरेर मन भुलाउँछु भनेर । म पन्छी भएत बादलसँगै उडेर आउने थिएँ मेरी प्यारी साहिँलीलाई भेट्न । तिमी पनि के अडिन्थ्यौ हौली र यदि तिमी पनि पन्छी भएकी भए ।
यता बर्खा लाग्यो साहिँली ! गाउँका फुच्चे खोलाहरु त राम्रै गाउँनै बगाएर लान्छु जस्तो गर्न शुरु गर्दैछन् । झन् कोशी नदीको त कुरै अर्कै । साउने भेल उर्लिने बेला भयो साहिँली अब । त्यसैले डाँडा बजार हाटमा भेटौँ भनेर तिमीलाई पत्र लेख्दै छु । अनि तिमै्र गाउँतिर ससुराली भएका एक जना साथीसँग यो पत्र पठाउँदै छु । ऊ झोलुङ्गे तरेर आउँदै छ है । तिमै्र म ‘हावापानी’ गाउँको हावा जस्तै तर तिम्लाई औधी माया गर्ने तिम्रो साहिँलो ।”
पत्र लेखिसक्दा साहिँलोले तुरुक्कै आँशु पनि झार्‍यो । साहै्र पो माया गर्छ साहिँलीलाई ऊ । साँच्चै लाली गुँराश फुलजस्तै रातै गाला भएकी अनि कञ्चनजंघा हिमाल जस्तै झरिलीभरिली र उज्याली छिन् साहिँली । “खोइ कसरी पो पट्यायो मोरो साहिँलोले” भन्दै दौँतरीहरु छक्कै पो परेका छन् ।
“आमा, आज भात छिट्टै पकाउ है ।” “किन र ?” “आज मलाई छिटै भोक लाग्छ नि त ।” “के भन्छ यो ?” साहिँला भात खाइवरी झोला बोकेर कोशी झर्न ठिक्क पर्छ । “अब कहाँ जानलाई झोला बोकिस् ?” साहिँला फिस्स हाँस्दै भन्छ, “उता कोशीपारी डाँडा बजार जानलाई नि आमा ।” “होइन तँ त डाँडा बजार भनेपछि हत्ते गर्छस् त, को छ हँ त्यता तेरो ?” आमालाई थाहा छ उनको छोराको चालामाला । “होइन तिमीलाई काम सघाउने बुहारी चाहिँदैन र ?” बुझिहालिन् आमाले अनि सम्झिन् आफ्नो पालाको कथा पनि । “अनि यो बर्खामासमा कसरी जान्छस् ? तलको पुलबाट जान्छस् कि माथिको झोलङुगेबाट ?” “आमाको आशिर्वाद भए कोशी नै तर्छु र डाँडाबजार पुगेर मिलिक्कै आइहाल्छु नि ।” “भेल बढेको होला, कोशीलाई ढोगेर तर् है ।” यति भएपछि साहिँला धाइफाल हान्दै कोशी झर्छ । जहाँ अलि सम्म परेको ठाउँ हुन्छ र लक्का जवानहरु पौडेरै कोशी पार गर्ने गर्छन् त्यहाँ पुग्छ साहिँला । कोशी किनारमा पुगेर कट्टु मात्र बाँकी राखेर साहिँला जीउको लुगा फुकालेर पोको बनाएर टाउकामा बाँध्छ । एक पटक कोशीमातालाई ढोग्छ र “जय कोशीमाता” भन्दै अरु केही जोशीला युवासँगै ऊ पनि कोशीमा हामफालेर पौडेर छिनमै पारी पुग्छ ।
बर्खाको झरनाहरुको पानी पिउँदै उकालो चढ्दै साहिँला डाँडा बजार पुग्छ । ऊ आज साहिँलीलाई केही उपहार दिने मुडमा छ किनभने बर्खा नसकिइ अब साहिँलीसँगको भेट असम्भव छ । उसले चुरौटेको पसलबाट निकै राम्रा र सुन्दर चुराहरु किन्छ । त्यहीँ दुईथान केशमा बाट्ने रातो लाछा पनि किन्छ अनि एउटा गोलो ऐना र केही टिका पनि । हुन त उसलाई औँठी पनि किनुँ कि भन्ने नलागेको त होइन तर विहेमा मात्र औँठी लगाइदिने अठोट छ । एउटा रुमाल पनि किन्छ तर तुरुन्तै फर्काउँछ, रुमाल उपहार दियो भने बिछोड होला भनेर । साहिँला केही खानेचिज पनि किन्छ । ल्वाङ, सुपारी, किसमिस, छोकडा, बदाम अनि पुस्टकारी र पान पनि । किनमेलको काम सकेपछि साहिँलीलाई खोज्न निस्किन्छ साहिँला तर डाँडाबजार सबै चाहार्दा पनि साहिँली भेटिन्न । साहिँलाको छट्पटी बढ्छ । मोबाइलमा सम्पर्क गर्छ तर साहिँलीको मोबाइल अफ रहेछ । साहिँला निराश हुन्छ साहिँलीलाई भेट्न नसकेकोमा । कि साहिँलीले ढाँटिन् ? तर ऊ पत्याउँदैन ।
“ए है !” साहिँला तर्सेर झसङ्ग हुन्छ । साहिँली त आफ्नै अगाडि पो ठिङ्ग उभिईराखेकी । “कहाँ थियौ र तिमी साहिँली ?” “मलाई कतिको माया गर्दा रैछौ भनेर हेरेको नि त । तिमी यो डाँडाबजार तीनपल्ट ओहोरदोहोर गर्‍यौ । म ऊ त्यहाँ डाँडामा बसेर तिमीलाई हेरिराखेको थिएँ ।” भन्दै खितित्त हाँस्छिन् साहिँली । साहिँलीको हाँसोमा साहिँला हुनसम्म भुतुक्कै हुन्छ । सेता हिमाल जस्तै टलक्क टल्कने साहिँलीका दाँतका पङ्ती कम्ति सुन्दर छैनन् अनि राताराता गाला कम्ति लोभलाग्दा छैनन् । सलक्क परेका जीउडालमा ढाकाको चौबन्दी चोली अनि छिट्को सारी, कम्मरमा सेतो पटुकीले साहिँली बिछट्टै राम्री देखिएकी छिन् । ढाकाकै बर्को ओढेकी साहिँलीको कान र नाकका सुनका गहनाले झिरिभ्mयाट्टै परेकी देखिएकी छिन् । सपक्क कोरिएका काला केश अनि केशमा उनिएका क्लिपले पनि उनको सौन्दर्यता निखारिएको छ । साहिँलीको बोलीको टोन नै मोहनी लाउने खालको छ । पुर्वी पहाडी लवजको सभ्य भाषाको सम्बोधन सुन्दा साहिँला भुतुक्कै पर्छ । त्यसो त साहिँला पनि कहाँ कमको छ र ? डाँडा बजार आइपुग्ने बेलाको भञ्ज्याङ्मा उसले पनि दौरासुरुवाल, स्टकोट, ढाकाटोपी लगायो । कम्मरमा कालो पेटी बाँध्यो र कपडाकै कालै जुत्ता लगाए पछि त ऊ पनि कम्ति राम्रो देखिएको छैन । थाहा नपाउने किसिमले अघि नै साहिँलीले नियाली सकिन् आफ्नो मायालुको सुन्दरता ।
अब उनीहरुलाई चाहिएको छ एकान्तता । उनीहरु बजारभन्दा अलि माथितिर लाग्छन् । बजारको थाप्लामा एउटा चौर छ । यो, साहिँला साहिँली जस्ता जोडिहरुको रोजाइको ठाउँ हो । आधुनिक भाषामा भन्दा डेटिङ् स्पट । उनीहरु त्यहाँ निकैबेर गफिन्छन् मनको धित् मरुन्जेल । माया पिरतीका कुरा, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कुरा गर्दै । अनि साहिँलाले झोलाबाट आप्mनी मायालुलाई मायाको कोशेली, चिनो झिकेर “लेऊ यो” भनेर साहिँलीको काखमा राखिदिन्छ । साहिँलीलाई थाहा छ तै पनि भन्छिन् “अप्पुई अन्त किन ?” “राखन” साहिँला माया पोख्छ । “आमम्मम, अन्त के के हौ, पान र पुस्टाकारी पनि ?” साहिँली मरुन्जेल हाँस्छिन् । हाँसो रोकिएपछि साहिँलाको मुहारमा पुलुक्क हेरेर ती मायाको चिनोहरु पोको पारेर पटुकीमा जतनले घुसार्छिन् । साहिँलाको मन ढुक्क हुन्छ ।
उनीहरु फेरि बजार झर्छन् । साहिँला भन्छ “आऊ साहिँली खाजा खाऊँ ।” उनीहरु गोसखानतिर जान्छन् । काँचो स्याउलाको छानो भएको थुप्रै छाप्रोहरुमध्ये एक छाप्रामा लगेर साहिँलाले आप्mनी प्राण प्यारी साहिँलीलाई राँगाको मासु र चिउरा खुवाउँछ । साहिँली स्वाद मानी मानी खान्छिन् । दाउराको आगोमा ठूलो कराहीमा फत्फत गरेर पाकिरहेको राँगाको मासु कम्ति मिठो हुन्न । दोकाने महिला ग्राहकहरुलाई पातका दुनामा तात्तातै मासु पस्केर दिन्छिन् । कोही ग्राहकहरु मासुमात्रै र कोही चिउरा र खुर्सानीसँग बढो स्वादले खान्छन् ।
साहिँला साहिँली त्यहाँबाट बजार बीचमा पुग्छन् । “ओ दिदी, ओ दाजु पानी पुरी खानुहोस्” भन्ने आवाजले साहिँला साहिँलीको ध्यान खिचिन्छ । हुन त साहिँलीलाई नै पानी पुरी खान मन पर्छ । दुर्गम पहाडका बजारमा पनि पानीपुरी बेच्न आइपुगेका छन् तराईका दाजुभाईहरु । मुन्टो ठाडो पारेर गाला पुक्क पारि पारि पानीपुरी खाइन् साहिँलीले । अलिपर पुगेपछि डमरु बजाउँदै बरफ बेचिरहेको देखेपछि बरफ खुवाउन मन लाग्छ साहिँलीलाई । “बरफ खाउन है साहिँली !” “अँ भो हौ अन्त कति खानु ।” “खाउन खाऊ बरफले पेट ठण्डा हुन्छ, अघि धेरै खोर्सानी खायौ नि त ।” साहिँलाले यसो भन्दा साहिँलीले मायालु पाराले साहिँलालाई पुलुक्क हेर्छिन् ।
उनीहरुलाई थाहा छ अब छुट्टिनु पर्छ भन्ने । अनायासै उनीहरुका पाइलाहरु बजार किनारतिर सर्छन् । साहिँलालाई बिदा माग्न गाह्रो हुन्छ । साहिँलीलाई पनि छुट्टिन उस्तै साह्रो । दुबै निकैबेर मौन उभिएपछि साहिँला बोल्छ, “जाऊ है साहिँली अब घर ।” साहिँलीले साहिँलाको मुहारमा पुलुक्क हेर्छिन् ।
“बर्खा लाग्यो साहिँली ! अब आइरहन पाउँदिन । बर्खा थामिए पछि दशैँ छेकमा आउँछु है साहिँली । अनि फेरि यो डाँडा बजार धित मरुन्जेल घुमौला ।” साहिँली मौन उभिइरहन्छिन् ।
“छुट्टिऔँ है साहिँली‘ खोइ त बोलेकी ?”
साहिँली त गहभरि आँशु टिलपिल पार्दै एकपटक साहिँलातिर पुलुक्क हेर्छिन् र सुँकसुँकाउन पो थाल्छिन् ।
“किन रोएकी साहिँली ? यसरी नरोऊ मलाई गाह्रो हुन्छ ।”
“के भनेकी साहिँली तिमीले यस्तो ? म तिमीलाई भेट्न नआएर कहाँ जान्छु र ? तिमी नै हौ मेरो लागि यो संसारमा ।”
“एक चोटी मात्र ? मेरी साहिँलीलाई लाखौँ चोटी फोन गर्छु ।”
“के हो नि यो साहिँली ।”
“बाटोमा खोलेर खाऊ ल । घरमा आफ्नै हातले तिम्रो लागि खाजा बनाएर ल्याएकी ।” साहिँलीको यस्तो माया पाएर साहिँलाले पनि तुरुक्कै आँशु झार्छ । साहिँली त हिक्का नै छाड्न थाल्छिन् ।
साहिँला बाटो लाग्छ । साहिँली सुँकसुँकाउँदै हेरिरहन्छिन् साहिँलालाई पहाडले ओझेल नपारुन्जेल ।